တောင်တက်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းအတွက် Auto Belay စက်များ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
သီးသန့် DUPLEX Spring ဒီဇိုင်း
PD®အားကစားသမား Sean McColl သည်သူ၏အိုလံပစ်ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေသည်
Perfect Descent Auto Belays သည်အမေရိကန်တွင်လက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ တိကျမှုမြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်အလူမီနီယမ်နှင့်သံမဏိအပြင်ဘက်အဖုံးပါ ၀ င်သည်။ ပေါ့ပါးပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆောက်လုပ်ရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းတို့သည်PD®သည်အားကစားရုံများ၊ စခန်းများ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များတက်ခြင်း၊ နင်ဂျာအတားအဆီးများသင်တန်းများနှင့်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးစင်တာများတွင်အလိုအလျောက်နှောင့်နှေးရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းအချို့ဖြစ်သည်။ 10x EN 341: 2011 Class A. ကိုစမ်းသပ်ပြီးလက်မှတ်ရခဲ့သည်။ အပန်းဖြေသော auto belay devices များအတွက်အပြည့်စုံဆုံးလက်မှတ်လိုအပ်ချက်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။
တည်မြဲ & ယုံကြည်စိတ်ချရသော
10x EN 341: 2011 Class A ကိုစမ်းသပ်ပြီးအပြင်ဘက်တွင်ကြာရှည်ခံသည့်အလူမီနီယမ်နှင့်သံမဏိကိုယ်ထည်များကိုအတွင်းပိုင်းတွင်တိကျစွာဝတ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ထားသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်မှုအတွက်အင်ဂျင်နီယာPD®၏သီးသန့် Duplex Spring Design ™ပါသောမလိုအပ်သောဆွဲယူမှု
တပ်ဆင်ရန်၊ ရွှေ့ရန်နှင့်အမြင့်တွင်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူပြီး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထပ်မံအတည်ပြုခြင်းတို့အတွက်တင်ပို့ရန်ပိုမိုသက်သာသည်။
၀ င်ငွေအဆင့်အတန်း၊ နှစ်စဉ်ပြန်လည်လက်ခံခွင့်အနိမ့်ကျခံခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုကောက်ခံခြင်းမရှိခြင်းနှင့်တာရှည်ခံသည့်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုင်ရှင်များအတွက်တစ်သက်တာငွေစုဆောင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲများတွင်အသင်းများနှင့်ထိပ်တန်းအားကစားသမားများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင်အသုံးပြုသောပထမဆုံး auto belay သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုလုံခြုံမှုနှင့်မျှတမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက် belay တည်ဆောက်ခြင်း
ပျမ်းမျှနှုန်းမှာ ၂ ပေ (၆၁ စင်တီမီတာ) နှုန်းဖြင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ယေဘုယျတောင်တက်ခြင်း၊ နွေးထွေးသောလမ်းကြောင်းများ၊ ကလေးများတက်သည့်ဘူတာများနှင့်အဖြစ်အပျက်များအတွက်သင့်တော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် Duplex Spring Design ™သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်စေရန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်။
မူလအလျင်အမြန်ပြန်လည်ထုတ်ယူသော auto belay သည်အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စံနှုန်းကိုသတ်မှတ်သည်။
တစ်စက္ကန့်လျှင်လျှပ်စီးအမြင့် 15ft (4.6m) နှုန်းဖြင့် Speed ​​Drive သည်မြန်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ တက်ကြွသောလမ်းကြောင်းများ၊ ကြားကာလလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်ဆားကစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
IFSC ကမ္ဘာ့ဖလား၏တရားဝင် Auto Belay တက်ခြင်းနှင့်ထူးကဲသော Duplex Spring Design ™။
သင့်ရဲ့ Lanyard ကိုရွေးချယ်ပါ
PD® Auto Belays သည်မြင့်တက်လာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ auto belay စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော lanyard အရှည်သုံးခုရှိသည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့် mounting အမြင့်နှင့်တူညီမှုသို့မဟုတ်အရှည်အားဖြင့်ညီမျှသော lanyard ကိုအမြဲရွေးပါ။
၉၈ ပေ (၃၀ မီတာ)
၁၈ ပေမှ ၂၈.၅ ပေအကြား (၅.၅ မီတာနှင့် ၈.၇ မီတာ) အမြင့်ရှိခြင်း
သံမဏိအလွိုင်း ၃ ခုပါသောအလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားသောကားများနှင့်ပေါင်းစပ်လည်ပတ်စေသည်
Anodized လူမီနီယံ၊ အဆင့်သုံးဆင့်အလိုအလျောက်သော့ခတ်နိုင်သောကားများပါ ၀ င်သောဆုံလည်
အဆင့်သုံးဆင့်ပါသောအလိုအလျောက်သော့ခတ်ထားသော carabiners များကိုခွေးအရိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ဆုံလည်ပါရှိသည်
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ပင်ဖြစ်သည်။ “ Perfect Descent အော်တိုကားချပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ Arial စွန့်စားမှု ၀ န်ထမ်းများသည်ငါဖောက်သည်အထောက်အပံ့လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းကောင်းစွာအသိပေးသည်။ ” 19 သြဂုတ် 2020 ရက်တွင်နော B. ခ
သြဂုတ်လ 19, 2020 ရက်တွင်နော B. ခ
အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး Autobelay ရရှိနိုင်ပါ။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
မေလ 9, 2019 ရက်တွင်သူ Mike
အလိုအလျောက် belay 2.0
ဇွန်လ 19, 2019 ရက်တွင် Kellen D.
မေလ 6, 2020 ရက်တွင်မောရစ် D.
ဤသည် auto belay 22 ပေနံရံအဘို့နှင့်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါ့ကိုပိုပြီးယုံဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမလိုအပ်! ၎င်းသည်အလွန်စိတ်ချရသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောခံစားမှုရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ငါငါ့နံရံ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒုတိယ 2nd ဝယ်ယူ!
ဇန်နဝါရီလ 28, 2020 ရက်တွင်စတိဗ်ဒဗလျူ
သင်၏ Auto Belay Management Program ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် auto belay စီမံခန့်ခွဲမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုသောအစောပိုင်းနှင့်တိကျသောမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြထားသည်။ ထုတ်ကုန်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ သတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာစာစောင်များနှင့်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဝေဖန်သော beta ကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်ခံရရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောအင်္ဂလိပ်နှင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားထုတ်ကုန်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်စွဲများကိုရယူပါ။ မော်ဒယ် ၂၂၀ နှင့် ၂၃၀ အလိုအလျောက် belay မ်ား၊ duplex spring ™စစ်ဆေးခြင်းနှင့် lanyard အစားထိုးလက်စွဲများ၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် disinfecting အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်လက်ရှိမှတ်တမ်းများကိုရယူပါ။
တပ်ဆင်ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကျသောနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်၏PD®စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မှအကျိုးအပြည့်အ ၀ ရယူပါ။ ဘုံပြcommonနာဖြေရှင်းရေးနည်းဗျူဟာများကိုလေ့လာပါ၊ ထုတ်လုပ်သူစစ်ဆေးရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖတ်ပါ။
EN စံနှုန်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အရည်အသွေးအတွက်ဘားကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ Perfect Descent Auto Belays သည် 10x EN 341: 2011 Class A. တွင်ရှိသောအပန်းဖြေမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းခံရပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်သောကိုက်ညီမှုနှင့်စာမေးပွဲလက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။